रातो फोका आउने अर्टिकारिया 'डाबर एलर्जी' के हो? :: डा अमृता श्रेष्ठ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
रातो फोका आउने अर्टिकारिया 'डाबर एलर्जी' के हो?
डा अमृता श्रेष्ठ आइतबार, वैशाख १८, २०७९, ०६:००:००
अर्टिकारिया (डाबर एलर्जी) हुँदा शरीरमा रातो फोका/ डाबरहरु देखा पर्छ। यो आफैंमा रोग भने होइन। यो कुनै रोगको लक्षण हुन सक्छ। त्यसैले छाला रोग विशेषज्ञको सल्लाह, सुझाव र उपचार गर्नुपर्छ।
डाबर एलर्जीका प्रकार
एक्युट: थोरै समयको (६ हप्ता भन्दा कम)
क्रोनिक: धेरै समयको (६ हप्ता भन्दा बढी)
रगत, दिसा, पिसाबमा समस्या
थाईराइड हर्मोनको गडबडी
खानेकुरा ,रुखबिरुवा, तरकारी, किरा फट्यांग्रा, धुलो, चिसो, तातो, दबाब, घाम, पानी, कम व्यायाम, पसिना आदिको एलर्जी।
अर्टिकारिया हुँदा छालामा हिस्टामिन भन्ने तत्व निस्किन्छ। शरीरका विभिन्न भागमा भएको इन्फेक्सनले पनि अर्टिकारिया गराउन सक्छ। जस्तै: हेपटाइटिस, इन्फेक्सन मोनोन्युक्ल्योसिस, दाँतको मोनोन्युक्ल्योसिस, दाँतको इन्फेक्सन, पिनास, युरिनरी ट्रयाक्ट इन्फेक्सन, बच्चाहरुमा हुने रेस्पिरटो ट्रयाक्ट इन्फेक्सनले पनि अर्टिकारिया गराउन सक्छ। क्रोनिक अर्टिकारिया भएका बिरामीहरुमा अटोइम्मुन थाईराइड डिजिज पनि हुन सक्छ।
सानो सानो रातो फोका डाबरहरु देखापर्छ।
शरीरका विभिन्न भागमा एक ठाउँबाट डाबर हराएर अर्को ठाउँमा देखापर्नु यो रोगको विषेशता हो।
कहिलेकाहीँ यो रोगसँगै आँखा र ऒठ पनि सुन्निन सक्छ र बिरामीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तुरुन्त अस्पतालमा लैजानुपर्छ।
रोगको पहिचान कसरी गर्ने त?
रोगको सुरु भए देखिको हिस्टोरी लिनुपर्छ।
रोग कसरी सुरु भयो, कति दिन सम्म बस्छ जानकारी लिनुपर्छ।
आँखा, ओठ सुनिन्छ कि सुन्निदैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ।
हिस्टोरीको आधारमा टेस्ट गर्नुपर्छ।
रोगको बारेमा बिरामीलाई बिस्तृत रुपमा भन्नुपर्छ।
रोगलाई कसरी कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्छ।
रगतको जाँच गरी रोगको कारण पहिचान गरी उपचार गर्नुपर्छ।
कारण हेरेर औषधि ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म चलाउनुपर्छ।
(श्रेष्ठ रिलाएबल पोलिक्लिनिक भक्तपुरकी छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ हुन्।)